घनेन्द्र ओझा काठमाडौं, ६ असार
समाजमा विरलै यस्ता मानिस जन्मिन्छन्, जो एक होइन, अनेक गुण, स्वभाव र विशेषता अनि क्षमताले युक्त हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिहरू सम्मानित, प्रतिष्ठित र प्रेरक पनि हुन्छन् ।
यस्तै व्यक्तिमा पर्छन्- शंकर कोइराला ।
पूर्वी पहाडको भोजपुरको पोखरेमा जन्मिएका शंकर कोइराला लामो समय निजामती सेवामा बिताएर मुलुकका अर्थमन्त्रीसम्म भइसकेका छन् । साढे २ दशक सरकारी सेवामा बिताएका शंकर कोइराला नेपाल सरकारको सचिव भई सरकारी सेवाबाट बाहिरिएपछि अर्थमन्त्री बनेका हुन् ।
शंकर कोइराला पूर्व विशिष्ट सरकारी कर्मचारी वा पूर्वमन्त्री मात्र होइनन्, उनको व्यक्तित्व कुशल स्रष्टाका रूपमा पनि रहेको छ । त्यसो त उनी अहिले समाजसेवा, शिक्षासेवामा पनि सक्रिय छन् ।
‘व्यक्तित्व’ स्तम्भका निम्ति हामीले आज उनै बहुआयामिक व्यक्तित्व शंकर कोइरालाको समग्र व्यक्तित्वलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।
शंकर कोइराला २ असार २०२० मा भोजपुरमा जन्मिएका हुन् । स्व. वेदनिधि कोइराला र धनकुमारी कोइरालाका ४ छोरा र १ छोरीमध्ये शंकर जेष्ठ सन्तान हुन् ।
नेपालमा शिक्षाको ज्योति निकै अघि छरिएको स्थान भोजपुरको बजार छेउमै जन्मिएका, हुर्किएका शंकरको परिवार मध्यम वर्गीय हो । आफ्ना पूर्वजहरू धेरैजसो सरकारी सेवामै रहेका र पहाडमा खेतीपाती पनि राम्रै भएका कारण शंकरलाई खान, लाउनको समस्या त थिएन नै, शिक्षाको पूर्वाधार निकै राम्रै भएको भोजपुरमा उनलाई पढ्न पनि समस्या भएन ।
शिक्षित परिवारमा जन्मिएका कारण पनि उनका अभिभावकमा छोराछोरीलाई उचित शिक्षा-दीक्षा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । त्यस समयमा भोजपुरको उनको गाउँमा प्राथमिक विद्यालय, निम्नमाध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, रात्रि स्कुल तथा क्याम्पससमेत स्थापना भइसकेका थिए । यी शिक्षालय उनको घरबाट १ किलोमिटरको दूरीमा वरिपरि थिए ।
हुन पनि बालागुरु षडानन्दले बनाएको समाजमा शिक्षाको जग नराम्रो हुने कुरा पनि थिएन ।
उनी घरबाट हिँडेरै विद्यालय जान्थे । विद्यालय नजिकै भएका कारण कुनै अप्ठ्यारो भएन उनलाई । त्यसबेला पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई बालवर्ग भनिन्थ्यो । उनले बालवर्गदेखि स्नातकसम्म भोजपुरबाटै गरे ।
उनले सरस्वती मावि पोखरेबाट ७ कक्षासम्म अध्ययन गरे भने भोजपुरको प्रसिद्ध विद्यालय विद्योदय माविबाट एसएलसी गरे, २०३५ सालमा ।
त्यसपछि भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र र स्नातक तह पूरा गरे ।
पुरुषोत्तम सर र प्रधानाध्यापकको त्यो पिटाइ
शंकर सानैदेखि शालीन र भद्र स्वभावका थिए । उनी मेधावी विद्यार्थी थिए विद्यालय र कलेज तहमा समेत । तर, बाल्यकाल, केही न केही उटपट्याङ आइहाल्छ । साथीभाइको लहैलहैले पनि थोरै प्रभाव पार्छ बालमस्तिष्कमा ।
यस्तै भयो शंकरको बाल्यकालमा पनि ।
विद्यालय तहमै पुरुषोत्तम नामका शिक्षक थिए नेपाली पढाउने । जाडोको महिनामा उनी कक्षाका विद्यार्थीलाई पढ्न लगाएर आफू घाम ताप्न झ्यालमा चढेछन् । घामको न्यानोमा मस्त उनी तन्द्रामा परेर लडेछन् ।
कक्षाका सबै साथी गलल हाँसेछन् उनी लडेको देखेर । पुरुषोत्तम सर नरिसाउने कुरै थिएन । सबै विद्यार्थीलाई पालैपालो पिटेछन् रिसमा ।
अर्को घटना पनि छ शंकरले पिटाइ खाएको । एक पटक विद्यालयको खाजा खाने समयमा केही साथी मिलेर नजिकैको नागदहमा पौडी खेल्न गएछन् । छेउको रूखमा लुगा राखेछन्, फेदमा किताब ।
एक जना गाउँलेले उनीहरूका लुगा र किताब लुकाइदिएछन् । यो कुराको पोल घर हुँदै विद्यालयसम्म पुगेछ ।
भोलिपल्ट प्रधानाध्यापक गुरुप्रसाद कोइरालाको रामधुलाई राम्रै भएको शंकर बताउँछन् । भन्छन्, ‘गुरु सरले १०-१० छडी हान्दा हातबाट रगत चुहिएको थियो ।’
डण्डी-बियो र अतिरिक्त क्रियाकलापमा रुचि
विद्यालयमा पढ्दा शंकरलाई डण्डी-बियो खेल्न ज्यादै मनपर्थ्यो । त्यसो त उनलाई क्यारिम बोर्ड पनि मनपर्ने खेल हो तर एसएलसी पास नगरेकालाई क्यारिम बोर्ड खेल्न दिइँदैनथ्यो । उनलाई त्यसबेला लाग्थ्यो रे, ‘कहिले एसएलसी पास हुन्छु र क्यारिम खेल्न पाउँछु ?’
नभन्दै उनले एसएलसी पास गरेपछि अर्थात् कलेज पढ्न थालेपछि नियमितजसो क्यारिम खेलेको सुनाउँछन् । ‘कलेज कहिल्यै नछुटोस् भनने लाग्थ्यो किनभने क्यारिम खेल्न पाइन्थ्यो’, शंकर भन्छन् ।
यसरी नै उनको रुचि त्यसबेला अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि थियो । प्रायः हाजिरी जवाफ, वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगितामा भाग लिन उनी छुटाउँदैनथे । र, यस्ता प्रतियोगितामा उनी प्रथम नै हुन्थे ।
उसो त उनले कलेज पढ्दा मनबहादुर मुखियाको चर्चित नाटक ‘अनि देउराली रुन्छ’मा अभिनय पनि गरे । यद्यपि, उनले अभिनयलाई निरन्तरता भने दिएनन् । उनले नाच्न-गाउन भने कहिल्यै रुचि गरेनन् ।
शंकरले स्थानीय भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसबाटै स्नातक तहसम्मको अध्ययन पूरा गरे । त्यसपछि स्नातकोत्तर गर्न उनी काठमाडौँ आए । ‘२ भाइहरू काठमाडौंमै बसेर पढिरहेका थिए, आमाले मलाई पनि काठमाडौंमै पढाउने इच्छा गर्नुभयो’, शंकर भन्छन्, ‘त्यसपछि म काठमाडौं आएर अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेँ ।’
उनी स्नातकसम्म मेधावी विद्यार्थी थिए । स्नातकमा उनी ‘टपर’ थिए । स्नातकोत्तरमा पनि राम्रै गरे ।
४ पुस्तादेखि सरकारी सेवामा
शंकरका ४ पुस्तादेखि सरकारी सेवामा थिए । परिवारमै सरकारी जागिर खानुपर्छ भन्ने धारणा बनिसकेको थियो । यसै कारण स्नातकोत्तर दोस्रो वर्ष अध्ययन गर्दै उनले जागिरका लागि प्रयास गरे । उनलाई करार वा अस्थायी जागिरमा रुचि थिएन । भन्छन्, ‘जीवन निर्वाहका लागि अस्थायी वा करारको अर्थ थिएन । मलाई सरकारी स्थायी जागिरमै विश्वास थियो र नाम निकाल्छु भन्ने आत्मविश्वास पनि ।’
नभन्दै उनले त्यसबेला लोकसेवासहित ६ ठाउँमा दिएको परीक्षामा सबैमा पास गरे । केही समय बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानामा काम गरेपछि लोकसेवामा अन्तर्वार्तामा नाम निस्कियो । यो २०४४ सालको कुरा हो ।
यसपछि उनी निजामती सेवामा शाखा अधिकृतका रूपमा नियुक्त भए ।
पहिलो पदस्थापन उद्योग मन्त्रालयमा भयो । त्यसबेला उद्योग मन्त्रालय निकै राम्रो मानिन्थ्यो कर्मचारीका लागि । वर्षमा एक-दुई पटक विदेश जान पाइने, विभिन्न संस्थानका पदपूर्ति समितिमा रहन, धेरैसँग जनसम्पर्क हुने भएकाले आकर्षक मन्त्रालयमा गनिन्थ्यो उद्योग मन्त्रालय ।
पछि अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व समूह खुल्यो । त्यहाँ परीक्षा दिएर २०४९ सालमा उनी अर्थ मन्त्रालयमा गए । त्यहीँ रहँदै २०५० सालमा उनलाई २ वर्षका लागि एसियाली विकास बैंकमा पठाइयो । यो अवसर उनी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवसर ठान्छन् ।
शाखा अधिकृतबाट एकै पटक सहसचिव
शंकर एक जना मात्र यस्ता शाखा अधिकृत हुन्, जो नेपालमै पहिलो पटक शाखा अधिकृतबाट सोझै सहसचिव बनेका थिए । २०५३ सालमा सहसचिवको खुला परीक्षा दिएर उनी सहसचिव बनेका बताउँछन् ।
सहसचिव भएपछि उनले अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाए । त्यसबेला नेपालले नेपाल भ्रमण वर्ष- १९९८ मनाउँदै थियो । ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको योजना थियो । उनी पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए ।
नेपाल भ्रमण वर्ष- १९९८ का सदस्यसचिव बने शंकर । उक्त जिम्मेवारी ठूलो र महत्त्वपूर्ण त थियो नै, निकै चुनौतीपूर्ण पनि थियो । तर, उक्त जिम्मेवारी र चुनौती उनले सहजता र सफलतापूर्वक पूरा गरे ।
‘सरकारको लक्ष्य ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने थियो’, शंकर भन्छन्, ‘४ लाख ९३ हजार पर्यटक भित्र्याउन सफल भइयो ।’
जागिरे जीवनका अविष्मरणीय क्षण
उनी नेपाल भ्रमण वर्ष- १९९८ का सदस्यसचिव थिए । भर्खर शेरबहादुर देउवाको सरकार ढलेर अर्को सरकार बनेको थियो । पर्यटनमन्त्री नयाँ आएका थिए । आफ्नो जिम्मेवारीमा प्रतिबद्ध हुँदै राम्रै काम गरिरहेका थिए । अचानक मन्त्रीसँग द्वन्द्व भयो । द्वन्द्वको कारण राजनीतिक भएको शंकर बताउँछन् ।
नयाँ मन्त्रीले राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर आफूलाई पर्यटनबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जगेडामा पठाएको शंकरको भनाइ छ ।
उनका अनुसार त्यसबेला पर्यटन बोर्ड गठन हुँदै थियो । बोर्डमा ५ जना सरकारका तर्फबाट र ५ जना निजी क्षेत्रबाट छान्नुपर्ने थियो । उनले दिएका नामहरू मन्त्रीले स्वीकार गरेनछन् । ‘मन्त्रीले नाम फेर भन्दा मानेनौँ, त्यही भएर द्वन्द्व बढ्यो’, शंकर भन्छन्, ‘त्यसपछि मलाई जगेडामा हालियो ।’
अर्को नमीठो घटना पनि छ उनको जागिरे जीवनको । उनी २०६३ सालमा सचिवमा बढुवा भए । सचिव र मन्त्रीबीच पाइलैपिच्छे असहमति र विवाद भइरहने उनको भनाइ छ । मन्त्रीका राजनीतिक स्वार्थ बढी हुने, कर्मचारीतन्त्रमा प्रकिया बढी ध्यान दिनुपर्ने, राजनीति गर्ने वा मन्त्रीले तुरुन्तै परिणाम खोज्ने, कर्मचारीले प्रक्रिया मिच्न नहुने हुँदा पनि विवाद बढी हुने उनको बुझाइ छ ।
यस्तैमा उनी ऊर्जा सचिव भएका बेला माथिल्लो तामाकोसी परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा तत्कालीन मन्त्रीसँग उनको विवाद भयो । उनी र मन्त्रीबीचको विवाद मिलाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले निकै प्रयास गरे पनि मिलाउन सकेनन् ।
त्यसपछि शंकरलाई नेपाल ट्रष्टमा सरुवा गरियो ।
उनको जागिरे जीवनमा दुखद् घटना कम, सुखद बढी भएको बताउँछन् । सामान्य अप्ठ्यारा र अवरोध अनि विवाद र द्वन्द्वलाई उनी स्वाभाविक ठान्छन् ।
‘लामो समय, विभिन्न भूमिकामा, विभिन्न मान्छेसँग काम गर्दा सामान्य विवाद, असहमति र द्वन्द्व स्वाभाविक हो’, शंकर भन्छन्, ‘मेरो जागिरे जीवन अन्यको भन्दा दुखद् खासै भएन ।’
उनलाई जागिरे जीवनका केही कुराहरूले निकै सुखद अनुभूति दिएका छन् । पहिलो कुरा त जीवन धान्ने आधार नै उनले जागिरलाई लिए । जागिरकै कारण उनले ७० वटाभन्दा बढी देश घुम्ने अवसर पाए । जागिरकै क्रममा एसियाली विकास बैंकमा २ वर्ष काम गर्ने अवसर पाउनु जीवनकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठान्छन् शंकर ।
पहिलो पटक आयोजना गरिएको नेपाल भ्रमण वर्ष- १९९८ को सदस्यसचिव हुन पाउनु पनि उनका लागि निकै खुसीको विषय बन्यो । उनी ऊर्जा सचिव हुँदा सम्झौता भएको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर विद्युतीय प्रसारण लाइनको सफलतामा उनी निकै प्रफुल्ल छन् भने जलस्रोत सचिव हुँदा बनाइएका विद्युत आयोजना कति सम्पन्न भएका र कति सम्पन्नको चरणमा रहेका देख्दा खुसीले गद्गद् भएको बताउँछन् शंकर ।
२५ वर्ष सरकारी सेवामा बिताएका शंकरले अन्त्यमा अनिवार्य अवकास लिन पाएनन् । कारण- राजनीतिका कारण भएको अपमान ।
अहिले पनि अझै १ वर्ष बाँकी छ शंकरको उमेर अवकास हुन । तर, उनले ८ वर्षअघि नै जागिरबाट राजीनामा दिए ।
उनी त्यस समय वरिष्ठताका आधारमा अगाडि थिए । सचिवबाट मुख्यसचिवमा बढुवा हुने समयमा उनीभन्दा कनिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाइएपछि आफूलाई अपमानित गरेको भन्दै उनले १५ साउन २०६९ मा सचिवबाट राजीनामा दिए ।
मन्त्री : राज्यको ठूलो विश्वास, इतिहासको महान् जिम्मेवारी
उनी सचिवबाट राजीनामा दिएर बसेका थिए । पहिलो संविधानसभा विघटन भएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा देश जाँदै थियो ।
मै हुँ भन्ने मसिहा राजनीतिक दलहरू चुकिसकेका थिए । राजनीतिक दलहरूबाट अर्को संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसक्ने निश्चित थियो ।
दलहरू आपसमै विश्वस्त हुन नसकेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नतिर लाग्दै थिए । गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको मन्त्रिपरिषद् निर्माणमा दलहरू सहमत थिए ।
यसै क्रममा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए शंकरले । ‘यो मेरो कार्यक्षमताको मात्र नभएर इमान र कार्यशैलीप्रतिको राज्यको विश्वास थियो’, शंकर भन्छन्, ‘राज्यको विश्वासलाई हाम्रो समग्र टिमले नै सफलता र कुशलतापूर्वक पूरा गरेको थियो ।’
उनी त्यसबेला आफूहरूमाथि अग्निपरीक्षा भएको र आफू संलग्न सरकार असफल भएको भए देश निकै ठूलो खतरामा पर्ने बताउँछन् ।
उनी संलग्न सरकारले त्यसबेला संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन अत्यन्त धेरै मतदाता (८० प्रतिशत)को सहभागितामा हिंसारहित ढंगले सम्पन्न गराएर नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको थियो ।
‘समय र इतिहासले दिएको गहन जिम्मेवारी सहजता र सफलतापूर्वक सम्पन्न गरियो’, शंकर भन्छन्, ‘त्यही निर्वाचनपछिको सभाले मुलुककै ऐतिहासिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको नयाँ संविधान जारी गर्‍यो ।’
शंकर विद्यालय पढ्दादेखि नै साहित्यमा रुचि राख्थे । विद्यालयमा हुने हरेकजसो कविता प्रतियोगितामा भाग लिन्थे र प्रायः प्रथम नै हुन्थे । वरिपरि हुने अन्य कविता प्रतियोगितामा पनि उनको सहमागिता रहन्थ्यो अनि पुरस्कृत हुने क्रम पनि जारी हुन्थ्यो ।
यो उनका निम्ति उत्साह थियो । अझ बीबीसी नेपाली सेवाबाट उनका कविता प्रसारण हुन्थे, यसले थप ऊर्जा दिन्थ्यो ।
२०३५ सालमा ‘मातृभूमि’ पत्रिकामा उनको पहिलो कविता ‘ट्याम्के’ शीर्षकमा छापियो । त्यसपछि काठमाडौंका चलेका साहित्यिक पत्रिकामा नियमित पठाउन थाले ।
कवितासँगै उनले कथा पनि लेखे । व्यंग्य लेखनमा पनि उनको कलम चल्यो । २०४१ सालमै उनको कथा ‘मधुपर्क’मा छापियो ।
उनका हालसम्म ‘टाँकीको घाँस, २०५७’, ‘निर्वस्त्र नगरी, २०६४’ नेपाली भाषाका कविताकृति र ‘सङ्ग्स अफ स्वालोज, २०७४’ अंग्रेजी कविताकृति प्रकाशित छन् ।
यसरी नै नेपाली चलचित्र ‘ग्रहण’का लागि लेखिएको चर्चित र लोकप्रिय गीत ‘धड्कनभित्र’ शीर्षकमै उनको गीतिसङ्ग्रह पनि प्रकाशित छ ।
उनी गीतमा धेरै पछि मात्र सक्रिय भएका हुन् । २०५० सालमा सङ्गीतकार शक्तिबल्लभको आग्रहमा उनले पहिलो गीत लेखे- ‘जिन्दगानी उकाली ओराली रहेछ, आउनुअघि जहाँ थिएँ जानु त्यहीँ रहेछ’ बोलको ।
उक्त गीत नै उनको पहिलो रेकर्ड भएको गीत हो ।
त्यसपछि उनलाई गीतलेखनमा मात्र तानेन, सङ्गीत अध्ययनमा पनि रुचि बढ्यो । उनले २०६१ सालमै शक्तिबल्लभको सङ्गीतमा उही ‘ग्रहण’ चलचित्रको गीत ‘धड्कनभित्र’लाई शीर्ष गीत बनाएर एल्बम नै निकाले । २०६४ सालमा ओलोकश्रीसँग मिलेर ‘उपमा’ एल्बम निकाले भने २०७० सालमा आलोकश्रीकै सङ्गीतमा ‘उत्साह’ तथा २०७५ सालमा पनि आलोकश्रीसँगै मिलेर ‘समय’ एल्बम निकाले ।
त्यसअघि नै पूर्वमुख्यसचिव तथा क्यानडाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. भोजराज घिमिरेसँग मिलेर ४-४ वटा गीत राखेर सुदेश शर्मा र चन्द्रराज शर्माको सङ्गीतमा ‘प्रहर’ एल्बम निकालेका थिए ।
शंकर आफू गाउन र नाच्न जान्दैनन् । उनमा त्यो रुचि पनि छैन । तर, सङ्गीतको सामान्य ज्ञान हरेक गीत सर्जकमा हुनुपर्ने उनलाई बोध भयो ।
यही कारण उनी २०६० सालतिर झन्डै डेढ वर्ष डा. भोजराज घिमिरेसहितको टोलीमा सङ्गीत सिक्न थाले ।
त्यसबेला राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासनको तयारी गरिरहेका थिए । प्रजातन्त्र पक्षधर केही सचिवलाई जगेडामा लगेर राखेका थिए । त्यही बेला भोजराज घिमिरे, उमेश मैनालीलगायत ६ जना सचिव जगेडामा थिए ।
उनीहरू समय कटाउन सङ्गीत सिक्न जान थाले । उनीहरूसँगै शंकर पनि सङ्गीत सिक्न गए ।
‘उक्त सिकाइ मेरालागि महत्त्वपूर्ण रह्यो । कम्तीमा पनि गीत लेख्ने मान्छेलाई सङ्गीतको सामान्य ज्ञान आवश्यक छ भन्ने बुझेँ’, शंकर भन्छन्, ‘मेरो गीत लेखनमा यसले ठूलो सहयोग गरेको छ ।’
समाजसेवा र शिक्षामा सक्रियता
अहिले शंकरका लागि सक्रिय रहने उमेर नै हो । अझै धेरै वर्ष उनमा शारीरिक र मानसिक क्रियाशीलता रहन सक्छ । उनी आफ्नो समय र ऊर्जालाई मर्न दिन चाहँदैनन् ।
यही कारण उनी अहिले पनि आफूले जानेको कुरा, आफ्नो विज्ञता मुलुकका लागि आवश्यकताअनुसार दिइरहेका छन् । राज्यले सुझाव, सल्लाह र सहयोग मागेमा उनी नाइँ भन्दैनन् । भन्छन्, ‘राज्यले मप्रति दशकौँसम्म गरेको लगानीलाई मैले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । राज्यले खोजेका र चाहेका बेला जुनकुनै अवस्थामा म सहयोग गर्न तयार छु, गरिरहेको छु ।’
उनी विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक संघसंस्था र अभियानमा पनि संलग्न र सक्रिय छन् । अहिले उनी आफू जन्मिएको, हुर्किएको र पढेको ठाउँ भोजपुरमा डिजिटल शिक्षाका लागि सक्रिय छन् । उनको अभियान छ- डिजिटल भोजपुर । डिजिटल ई-लर्निङ सिस्टमबाट भोजपुरमा शिक्षामा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने उनको अभियान छ ।
‘यो अहिले हामीले सरकारी विद्यालयका लागि ल्याएका हौँ’, शंकर भन्छन्, ‘पहाड, त्यसमा पनि दुर्गम ठाउँमा यसलाई सफल बनाउन सके देशका अन्य धेरै ठाउँमा यसको विस्तार हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, ६ असार २०७७, ०२:४८:००